Tokana ihany ny kandidà dia Ramatoa Lalao Ravalomanana – MyDago.com aime Madagascar
Tokana ihany ny kandidà dia Ramatoa Lalao Ravalomanana
Mitohy ny tolona hoy ny Ct Fanja androany teny amin’ny Magro Behoririka mandram-pahatonan’ny filoha Ravalomanana Marc eto an-tanindrazana. Mbola tsy afaka mirehareha isika hoy izy fa mbola betsaka ny asa miandry antsika. Neny Lalao izay raiamandrenylehibe afaka mitondra ny firenena. Teratany malagasy izy hoy ny Ct Fanja ary manana fanamarinam-ponenana mipetraka eny Faravohitra,ka lazaina fa tsy afaka milatsaka. Tsy mila manao antso avo eto isika hoy izy fa i
Neny Lalao Ravalomanana no kandidàntsika. Mila asa goavana miandry izany fa 1eur tour dia vita.Mila olona matotra ny fitondrana ny firenena hoy izy ary aza manaiky ho voavidin’ny olona vola isika. Ny Cst Henri kosa dia nanambara fa tapitra androany ny fivorian’ny CPS ka miandryisika. Misy mandika vilana ny fehinkevitr’izy ireo kanefa ny tena izy hoy Henri dia hoe rehefa vita ny fifidianana vao ho fafana ny sazy, ary izay vao tafaverina ao anatin’ny firaisambe afrikana isika. Rehefa tsy eken’ny CES ny kandidà Lalao Ravalomanana dia tsymandray anjara amin’ny fifidianana isika. Efa fantatry ny fikambanana iraisam-pirenena izany fa tena hanao ka ho hita eo. Ny Ct Charline avy Boeny dia nampita ny hafatry ny vahoaka any an-toerana. Izahay hoy izy dia vonona tanteraka hampandany an’i Lalao Ravalomanana. Izahay tsy miroaroa saina intsony amin’izany.Izahay dia mahafantatra hoy izy fa i Dada ihany no afaka mampandroso ny firenena. Misy ny lesoka amin’ny lisim-pifidianana any an-toerana hoy izy toy ny solontenan’ny Ankolafy Ravalomanana tsy mbola tafapetraka ao anatin’ny Ceni-T .Noho izany dia manao antso avo ho an’ny tomponandraikitra hijery akaiky an’izany. Ny Ct Horace dia nanamafy fa nykandidàn’ny Ankolafy Ravalomanana dia tokana ihany dia ramatoa Lalao Ravalomanana. Tsy maintsy mandresy ary voalohany isika hoy izy rehefa sahy mandrotsaka kandidà. Nambarany ihany koa fa efa nitsangana ny komity mpanohana an’i Lalao Ravalomanana. Tsy hanao propangady io hoy Horace fa hidina any amin’ny fokontany amin’ny fijerena ny anarana’ny olona ao anaty lisim-pifidianana. Noho izany dia nanentana ny vahoaka ny tenany mba hiditra ao anatin’io komity mpanohana an’i Lalao Ravalomanana io. Marihina fa rahampitso dia etsy amin’ny Ekar Antanimena indray no hanatanterahana ny fotoam-pivavahana ho fitrotrona am-bavaka ny fianakaviana Ravalomanana. Efa fanao isaky Alarobia moa izy ity.
Hiroso amin’ny fifidianana ny Ankolafy Ravalomanana : Ramatoa Lalao RAVALOMANANA no kandidà
Me RAZAFIMANANTSOA HANITRA : SAFIDINTSIKA FA TSY NISY NOTERENA NY FANOLORANA AN-DRAMATOA LALAO RAVALOMANANA HO KANDIDA
Auteur Solo Razafy*Publié le 23 avril 2013 Catégories Politique
8 réflexions sur « Tokana ihany ny kandidà dia Ramatoa Lalao Ravalomanana »
angah tsy efa maty lé lalao????
24 avril 2013 à 7 h 33 min
Aza manao sangy mihoatra ny loha rahavana mitonotena ho « peuples malgaches » fa tsy misy mandratra ny Malagasy tahaka izao ataonao izao!
Mazava ny fanambarana farany momba ny raharaha eto Madagasikara navoakan’ny Firaisambe afrikana. Laharam-pahamehana ho antsika izao ny manamarina ny anarana anaty lisitra, manolo ny karapanondro koa mba tsy ho tratry ny hoe lany andro (mihoatra ny 10 taona nanaovana azy)amin’ny fotoan’ny fifidianana, ary manazava amin’ny rehetra ny amin’ny bileta tokana.
andevina ani Deba zao nendrasana : kely sisa !
Fa Ranjeva njay ve ny voizina fa gomena njay Lalao e ??? Taibe le Naika klé !!!
24 avril 2013 à 19 h 00 min
Tsinaita avaratra tany amy Dada Naika de korotana any amy Ranjeva njay natao ! Vevavy tsy miketrika nelisany fa pams !!!
Tandems fa misy be retina sahady ka hoe efa nifidy kandida iray hasolo an’i Lalao RAVALOMANANA raha toa ka Tsy ekena ny filatsahany. Izany aloha dia Tsy ekena, ary Tsy ha ohatra Izany kandida Izany mihitsy ny olona. Tandemo ny lainga.
fozaorana dit :
26 avril 2013 à 21 h 06 min
lalao ramarson no efa maty kah
26 avril 2013 à 21 h 09 min
fozaorana zao no tanjona hovonoina ry zandry kely ah!hofongorona daholo ny mpomba azy sy ny forongony,ary havalona eo ny tantarany,
ary mialy kely be fory ve tsy mba hilatsaka eh!hifidy azy aho raha mamelatra amiko sy mono2 bi2ty tsara izy an
Précédent Article précédent : ANKOLAFY RAVALOMANANA : Tonga nitsapa alahelo ny fianakavian’i Lalao Randriamampionona
Suivant Article suivant : Communiqué de la 368ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité sur la Situation à Madagascar